Fotoam-bavaka ny Alatsinainy 12 Oktobra 2009 ho an'i pasitera Rakotoharintsifa – FJKM Ambavahadimitafo Fotoam-bavaka ny Alatsinainy 12 Oktobra 2009 ho an'i pasitera Rakotoharintsifa |
Fotoam-bavaka ny Alatsinainy 12 Oktobra 2009 ho an'i pasitera Rakotoharintsifa
Publié le 12 octobre 2009 à 12:10
Ny mpianatra ao amin’ny Faculté de Théologia Ambatonakanga dia hanatanteraka fotoam-bavaka eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo ihany ny Alatsinainy 12 Oktobra 2009 amin’ny 5 ora hariva ho fangataham-pitahiana ho an’i pasitera Rakotoharintsifa Andrianjatovo izay tsy salama amin’izao fotoana izao.
Efa hitan’ny mpitsabo ankehitriny ny soritr’aretina mahazo ny mpitandrina, na dia mbola tsy tena fantatra aza ny tena fototry ny aretina.
Ka araka ny vaovao nampitain’ny Biraom-piangonana ary dia ny Talata 13 Oktobra 2009 no tsy maintsy hanaovana fandidiana (opération) ny mpitandrina ao amin’ny Hopitaly militaire Soavinandriana.
Izany fandidiana (opération) izany moa dia tsy mbola manala ny fototr’aretina fa natao indrindra hanamaivanana ny soritr’aretina izay efa hita.
Ny fitsaboana izay azo atao eto an-toerana moa dia hatao eto daholo, nefa mety hisy ny fitsaboana any am-pitandranomasina arakaraky ny fanapahan-kevitra raisina.
Koa manentana antsika rehetra mba hitondra am-bavaka izany rehetra izany.
Ankoatr’izany dia mbola manao antso avo amin’ny rehetra ny Biraom-piangonana amin’ny fanampiana ara-bola, satria dia ho vola betsaka no ilaina amin’izany fitsaboana rehetra izany.
Asaina isika rehetra mba hanjohy ny rojom-bavaka isan-tokantrano izay atao isaky ny amin’ny 8 ora alina.
*Marihina fa tsy azo atao ny mamangy ny mpitandrina eny amin’ny hopitaly (visite strictement interdite).
*Ramatoa vadiny koa dia miangavy ny rehetra mba tsy hiantso amin’ny telefaonina satria ao anatin’ny fankaherezana ny mpitandrina tanteraka izy.
Ho amintsika mianavaky anie ny Tompo